I-KATE SPADE KUNYE NE-KEDS NAZO ZIDITYANISIWE ZENZA IISNEAKER ZENTYATYAMBO - IINDABA ZOMTSHATO
Eyona Iindaba Zomtshato UKate Spade kunye neKeds nazo zidityanisiwe zenza iiSneaker zoMtshato ezithandekayo zaMantombazana eNtyatyambo
UKate Spade kunye neKeds nazo zidityanisiwe zenza iiSneaker zoMtshato ezithandekayo zaMantombazana eNtyatyambo
(Ityala lemifanekiso: I-Keds kunye ne-Kate Spade)
Ngu: Joyce Chen 02/26/2018 ngo-4: 20 PM
UKeds noKade Spade basandula ukubhengeza ubuhlakani obutsha ekwandiseni ingqokelela yezihlangu zomtshato ezinomdla-phantsi kweenyawo ezincinci kumtshato! Iimpawu zazisa ngokusesikweni umgca we-Keds izihlangu zabantwana zamantombazana eentyatyambo kunye neentombi ezitshatileyo ezincinci, kanye ngexesha lesizini.
Uyilo olucekeceke nolonwabisayo lwe-Keds yekate yokuqokelela i-york entsha ivumela amantombazana eentyatyambo ukuba akhanye ngosuku olukhulu, uKeds Kids Designer uKalaine Noble uxelela Ingcaciso . I-Glitter Champion sneakers inezinto ezibengezelayo kunye ne-satin, kwaye ikwabonelela abantwana ngentuthuzelo kunye nozinzo njengoko behla indlela.
Ngokwengxelo epapashiweyo, izihlangu ezitsha ezibengezelayo ziya kubotshwa ngeentolo ze-satin kwaye ziya kuba yinto efanelekileyo yokuqaqamba emtshatweni. Ubungakanani baba bungakanani beeteki ezimalunga nentsana ukusuka ku-1-4 wosana, abantwana abancinci 5-10 kunye nabantwana abakhulu abayi-10.5-6.
Imibala ikwaqhuba i-gamut ebanzi ukulungiselela izitayile ezahlukeneyo kunye nezikimu zemibala, kubandakanya i-creme, umkhosi waselwandle, igolide kunye nesilivere.
Ekupheleni kwenyanga ephelileyo, uKade Spade kunye noKeds babhengeze ingqokelela yomtshato wabo wokuqala, owenziwe ngentuthuzelo yomtshakazi kunye nefashoni engqondweni.
I-Keds x Kate Spade New York ingqokelela yomtshato ngumanyano ogqibeleleyo wobumnandi kunye nobukhazikhazi bayo yonke into ukusuka kwishower yomtshakazi ukuya kwizipho zeentombi ezitshatileyo zokuhamba ezantsi ngakwindlela eyonwabileyo nasemva koko, inkampani ithe yapapashwa kwi-Lizapourunemerenbleus. Amalungu alinganayo ayathandeka kwaye ayathuthuzela, ezi ndlela ziyimfuneko kubafazi abaza kuba!
(Ikhredithi yemifanekiso: IKeds kunye neKate Spade eNew York)
Iziteki zomtshato ziyafumaneka ngeendlela ezahlukeneyo ezingama-30 kunye nenani lemibala ecaleni komhlophe (kwakhona, ukuphendula ngengqondo yomfazi ngamnye yesitayile): igolide nesilivere, kunye nepinki epinki eqaqambileyo.
Isipho sokuzalwa esihle somfazi
Iindawo zomtshato waselwandle california esemazantsi
ezinye iingoma zomtshato kuqala umdaniso